Shiinaha B Taxanaha Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida iyo Alaab-qeybiye | MIT
* Nidaamka kontoroolka dhexe ee madaxa banaan: hal gacan qabasho ayaa kor iyo hoos ugu qaadi kara masraxa, soo jiidi kara munaaradaha Haydarooliga u eg ee qaabeeya oo hubinaya 360 ° wareega. Dhululubbooyinku waxay bixiyaan jiiditaan xoog leh iyadoon xoog lagu kaxayn. Dhererka shaqada ee kala duwan (375 ~ 1020mm) waxay ku habboon yihiin hawlwadeenno kala duwan. iyo qaadista dugsiga sare. Si fudud ayaa loo shaqeeyaa oo waxtar u leeyahay.
* Barxadku kor iyo hoos ayuu kor ugu qaadi karaa korna u qaadi karaa iyo sidoo kale wiish jilicsan, taas oo hubineysa dhammaan noocyada shilalka gawaarida inay ka soo degaan ama ka baxaan madal aan wiish lahayn. Dhererka shaqada ee kala duwan (375 ~ 1020mm) waxay ku habboon yihiin hawlwadeenno kala duwan.
* Ku qalabeysan kan ugu fiican adduunka ee isku-xirnaanta T-top, meeleynta iyo hagaajinta gawaarida si deg deg ah oo adag. Nidaamyo cabbir badan ayaa ikhtiyaari ah.
* ￠ 12 silsilado waara ayaa xaqiijiya xoog iyo badbaado sare.
* Qalabka jiidaya Mo-clamp, oo laga soo waariday USA, waa ikhtiyaari, kuwaas oo ku habboon nooc kasta oo iswaafajin ah.
* Nidaamka kontoroolka dhexe ee guud ahaan kuxiran wuxuu hubiyaa awood xoog leh, heerka guuldarada yar.
* Lugaha giraangiraha istaaga ayaa munaaradaha si fudud u dhaqaajinaya. Qalajiyaha gudaha qalabka dusha sare ka dhigayaa mid adag oo waara.
* Xoojinta dheeraadka ah ee barxadda waxay hubisaa cimri dherer. Nidaamyada kala duwan ee cabbiraadda korantada ayaa la jaan qaadi kara, taasoo ka dhigaysa barxadda mid wax ku ool ah
* Dogob dhaqaaqo wuxuu kordhiyaa booska howlgalka.
Fasalka B / C class / SUV / MPV
Hore: MAXIMA Dent Puller Mashiinka Alxanka B3000
Xiga: M Serires Qalabka Toosinta ee Jirka